नाकाबन्दीको निहुँमा मनपरी भाडा असुल नगर्न क्ल्वको आग्रह – Gulmiews
नाकाबन्दीको निहुँमा मनपरी भाडा असुल नगर्न क्ल्वको आग्रह
December 22, 2015 Sanju Kauchha
No comments	सागर भण्डारी
बुर्तिबाङ पौष ६ । नाकाबन्दीको निहुँपारी जिल्लाको ग्रामिण भेगमा सञ्चालित सवारी साधनले मनपरी भाडा असुल्ने गरेको भन्दै वृहस्पति युवा क्ल्व बोहोरागाउँले यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ ।
क्ल्वका अध्यक्ष नवराज आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले बुुर्तिबाङ देखि निसीको भल्कोट सम्म सञ्चालन हुने जिप तथा बस व्यवसायी समितिहरुले मनोमानी ढगंले यात्रुहरुबाट भाडा असुल्ने गरेको भन्दै यसले सर्वसाधारणलाई सुविधा भन्दा पनि झनै कष्ट पैदा गरेको समिक्षा गरिएकोे छ । साथै उक्त बैठकले मनोमानी रुपमा लिँईदै आएको भाडादरलाई तुरुन्त समायोजन गर्न पनि अपिल गरेको छ ।
उक्त खण्डमा चल्ने यातायातका साधनहरुले यात्रुबाट साविकको भन्दा धेरै पैसा असुल्ने गरेको गुनासो समेत उक्त बैठकमा सहभागीहरुले गरेका छन् । पहिले २ सय रुपैयाँमा यात्रा गर्दै आईरहेका यात्रुहरुले अहिले ३ सय देखि ३ सय ५० रुपैयाँसम्म तिर्ने गरेको बताएका छन् । उक्त बैठकले भाडादर तुरुन्तै समायोजन नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय पनि गरेको क्लवका सहसचिव मिलन हमालले जानकारी दिनुभयो ।
Related Posts	ग्वालीचौरमा एम्बुलेन्स अभियान, ५ दिनमा ६ लाख रुपैँया संकलन...	October 4, 2016	ग्वालीचौरमा भब्य सास्ँकृतिक कार्यक्रम शुरु, भलिबलमा ४२ समुहको सहभागीता...	October 2, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ)